Kristy, mbola mpampianatra antsika
“Koa ny oloko dia hahalala ny anarako; eny, amin’izany andro izany dia ho fantany fa Izaho no miteny hoe: inty Aho” Isa. 56:6
Satria voatahiry eo amin’Andriamanitra ny olombelona, vokatr’izany dia hampianarin’Andriamanitra tahaka ny tamin’ny fotoana voalohany indray izy ireo.Tsy azontsika sary an-tsaina na dia kely akory aza izay zavatra haseho sy hosokafana eo anoloantsika. Hiaraka hanedeha amin’i Kristy eo anilan’ilay rano velona isika. Hasehony antsika ny fahasoavana sy ny hatsaran’ny voninahitra fonosin’ny natiora. Hasehoany antsika hoe maneho inona ho antsika Izy ary isika maneho inona ho Azy. Ireo fahamarinana izay tsy azontsika fantarina ankehitriny, amin’ny maha-voary voafetra antsika, dia ho fatantsika rehefa tonga any.
I Kristy no hitarika ireo voary voaavotra ho eny anilan’ilay reniranon’ny fiainana, any amin’ilay tanàna ho avy, ary hampianariny an’ireo voaavotra ireo ny lesona mirakitra ny fahamarinana. Ho hitan’izy ireo fa misy tanana lehibe mihazona ny fipetrahan’izao tontolo izao. Ho hitan’izy ireo ny fahaizana asehon’ilay Mpahay hoso-doko lehibe indrindra, amin’ny fandokoany ireo voninkazo eny amin’ny saha, hianaran’izy ireo ny tanjona kandren’ilay Ray be indrafo, izay manome ny tara-pahazavana rehetra, ary ny voaavotra sy ny anjely dia samy hiaraka hanaiky, amin’ny alalan’ny hira fisaorana sy fiderana, ny fitiavan’Andriamanitra ambony indrindra an’ilay tontolo tsy mpankasitra.
Hanana fahafahana malalaka ny mpianatra, handalina sy hianatra mikasika ny tantatra tsy misy fahataperany sy ireo harena tsy hay hazavaina. Ny tantaran’ny fidiran’ny fahotana; ny amin’ireo mahafaty sy ny fomba fiasany feno faharatsiana; ny amin’ilay fahamariana, izay navily tsy hanaraka ny lala-mahitsy tokony hizorany, izany rehetra izany dia hovelarina mazava tsara avokoa. Ny voaly manelanelana ny tontolo hita maso sy ny tontolo tsy hita maso dia hesorina, ary zavatra tsara sy mahafinaritra no haseho.
Fahasambarana tsy hay lazaina no hidirantsika eo amin’ny fifaliana sy fahendren’ireo voary tsy nahafantatra fahalavoana. Hifampizara ireo harena azo tamin’ny fizotran’ny tantatra sy ny fotoana niderana ny asan’Andriamanitra isika. Ary ireo taona mandrakizay, dia hitohy hatrany ka hitondra fanambarana be voninahitra bebe kokoa ho antsika. “Mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika” mandritra ny mandrakizay mandrakizay ny fizaràna ny fanomezan’Andriamanitra.
Ireo fitsipika mahitsy rehetra, ireo fahamarinana nianarana rehetra tety amin’ny sekolin’ny tany, dia hanampy antsika handroso kokoa any amin’ny sekolin’ny lanitra.
Ny fanabeazana izay atombontsika ety an-tany dia ho hatsaraina ho lasa tonga lafatra rehefa any an-danitra. Kilasy avo lenta mihoatra noho ny tety an-tany fotsiny ihany no hidirantsika.